नायक बन्ने कि खलनायक ? – Avenues Khabar
१० जेष्ठ २०७७, शनिबार ०९:५४ मा प्रकाशित
राष्ट्र हाम्राे हाे, राष्ट्रियता हामीलाई प्याराे छ, हामी जनता स्वाभिमानी छाैं । त्यसैले हामी भन्छाैं- राष्ट्र, राष्ट्रियता र स्वाभिमानमा सम्झाैता हुन सक्दैन । नेपाल- भारत सम्बन्ध र सीमा विवाद हतारमा निर्णय गरेर फुर्सदमा पछुताउने विषय हाेइन । याे गम्भीर विषय हाे र यसलाई निचाेेडमा पुर्‍याउन परिपक्व कुटनीतिकाे खाँचाे छ । कुटनीतिमा सत्यकुरा गलत मुखबाट निस्कियाे भने त्यसले आफैंलाई “ब्याकफायर” गर्न सक्छ ।
परराष्ट्रमन्त्रीकाे नेतृत्वमा परराष्ट्र सचिवकाे कुशलताकाे आवश्यकता यतिखेर जरूरी छ । परिपक्व मुलुककाे परिपक्व कुटनीति देखाउन सक्नु पर्दछ । अहिले देखिएकाे सीमा समस्यालाई दीर्घकालिन समाधान गर्ने अवसरका रूपमा लिएर वार्ताबाटै समाधान खाेज्नुकाे विकल्प छैन । नेपालले स्वेतपत्र जारी गरेर तथ्य र प्रमाणसहित परिपक्व कुटनीतिक वार्ता थाल्नुकाे विकल्प छैन ।
हामीले आफ्नाे भूमि अधिनमा लिने र भारतलाई स-सम्मान पछि हट्ने वातावरण निर्माण नै अहिलेकाे खाँचाे हाे । पाैंठेजाेरी खाेजेर आगाेमा घिउ थप्ने काम कहिँ कतैबाट कसैले पनि गर्नु हुन्न । प्रतिकुल याे संवेदनशील समयकाे सदुपयाेग हाेस् अनावश्यक बखेडा झिकेर विवाद माथि विवाद सृजना गर्नु बुद्धिमत्ता हाेइन । जटिलताकाे मर्म पीडादायी हुन्छ, पीडामा नुनचुक हाेइन मल्हमकाे आवश्यकता पर्दछ ।
आफ्नाे स्वभिमान रक्षार्थ किमार्थ पछि पर्दैन वीर गाेर्खाली सबैले बुझेकै कुरा हाे । महामारीकाे संकटभित्र भुखमरीले प्रवेश नगराेस् भन्ने तर्फ सचेत हुनै पर्दछ । चाणक्यले उपदेशमा भनेका छन्- “कमाइ पर्याप्त छैन भने खर्च कम गर, जानकारी पर्याप्त नभए शब्दमा नियन्त्रण गर ।”
तथ्य र प्रमाण, सत्य र स्वाभिमान कदापी नभुलाैं । आँखै अगाडि मिचिएकाे लिपुलेक, कालापानि, सुस्ता र माने भञ्ज्याङ यथार्थ बुझेर बुझपचाउँदै गद्दारी गर्नेहरूकाे खाेजी गर्नेतिर पनि लागाैं । महेन्द्रका पालामा छापिएकाे नेपालकाे नक्सा कसले हटायाे ? अँगालाे भरी तथ्य र प्रमाण हुँदा हुँदै बैरीले सीमामा आदिपत्य जमाएर बसेकाे टुलु टुलु हेरेर बस्ने विगतका शासकहरू काे काे थिए ? लिपुलेक, कालापानि नक्साबाट हराउँदा दिल्लीमा राबडी खाएर रमाउने गद्दारकाे जय जयकार गर्ने हामी कति जिम्मेवार छाैं ? आफैंले आफूलाई धिक्कार भन्ने कि नभन्ने ?
भारतले छ दशकदेखी हाम्राे सीमामा कृत्रिम विस्तार गर्दै आएकाे थियाे रे, कमल थापाकाे खुलेकाे चेत हाे याे । सत्ताशुखमा कमल थापाले कहिल्यै कालापानि, लिपुलेक र सुस्तामा सीमा मिचिएकाे देखेनन् । आफैं परराष्ट्रमन्त्री हुँदा मिचिएकाे सीमाभूभाग फिर्ता गर्नेतर्फ कुटनीतिक बहस कहाँ कतिबेला गर्न भ्याए ? अहिले राेइलाे गर्नेमा अग्रमाेर्चामा उभिएका छन् कमल थापा । भारतकाे हण्डी र डण्डीमा आफ्नाे राजनीतिक सुनिश्चितता देख्ने नेताहरूले आफ्नै छातीमा हात राखेर आफ्नै सन्ततिकाे किरीयाखाएर प्रयास्चित गर्न सक्छन् यतिखेर ? यदि सक्छाै भने बाटाे खुल्याे राज्यले आफ्नाे पूर्ण नक्सा तिम्रा हात हातमा पुर्‍याएकाे छ, त्याे नक्सा बमाेजिम आफ्नाे भूमि रक्षार्थ जाइलाग बैरीमाथि ।
कला, साहित्य र सृजनाकाे सीमा हुँदैन तर कलाकार, साहित्यकार र सर्जककाे देश हुन्छ । डा मिनेन्द्र रिजाल र मनिषा काेइरालाकाे राष्ट्रप्रेम प्रति बैरीले बकबक गर्नुकाे कुनै तुक छैन । लिपुलेक सहितकाे नक्सा सार्वजनिक भएपछि तिलमिलाएकाे भारत सरकारले स्वयं वक्तव्य मार्फत स्विकारेकाे सत्य केहाे भने भारतकाे अखण्डता र सार्वभाैमिकताकाे सम्मान नेपालले गर्नु पर्छ रे । हाे, हामीले खाेजेकाे पनि त्यही हाे । आज जसरी नेपालकाे पूर्ण नक्साले भारतियलाई पाेल्याे त्याे पाेलाइकाे रापमा नेपाल र नेपालीले कति पीडा भाेगेका छन् ती दम्भि शासकलाई महसुस हुन्छ ? हेपिनुकाे पनि त सिमा हुन्छ, दादागिरीकाे पनि हद हुन्छ । कहिल्यै गुलामी नस्विकार्ने वर्गका गाेर्खाली हाैं हामी । आज पर्यन्त छिमेकी र उस्काे रवैया फेरिएन भने त्यसकाे प्रतिवाद गर्ने क्षमता राख्छन् नेपालीहरू भन्ने प्रतिनिधि पात्र हुन मिनेन्द्र र मनिषा । याे कुराकाे हेक्का राखाेस् भारतीय सञ्चारमाध्यमले । अब जेहाद छेडिएकाे छ, याे रणभूमिमा काे नायक बन्छ र कसले खलनायककाे भूमिका खेल्छ ? यता तर्फ नेपाली सञ्चार जगत केन्द्रित हुन ढिलाइ गर्नु हुन्न ।
२४ चैत्र २०७६, सोमबार १९:३७
कास्की: लकडाउनको कारण उत्पादन नबिकेपछि…
चन्द समूहका नेता अनिल शर्मा पक्राउ
२३ बैशाख २०७७, मंगलवार १५:१०
काठमाडौं : थारु समुदायले माघ १ गतेलाई नयाँ वर्षका रुपमा धुमधामका साथ स्नान, दान, एवं खानपिन र रमाइलो…
काठमाडौ । मस्जिदमा बसेका तीन जना भारतीय नागरिकमा कोरोना संक्रमण भेटिएपछि वीरगञ्जको छपकैया क्षेत्रलाई…
मन्त्रिपरिषदले पारित गरेका दुई अध्यादेश राष्ट्रपतिद्धारा जारी
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद बैठकले पारित गरेको दुवै अध्यादेश जारी गरेकी छन् । दिउसो…